Wararka - Waa maxay shaqooyinka dabagalka baabuurta ee la beddelay iyo jaakadaha hubku?
1. Qurux badan, ha ahaado giraangirkii asalka ahaa ama giraangirkii la beddelay, sababo kala duwan oo la yaab leh awgood, giraangirta iyo taayirku isma waafaqsanayaan baaburka baabuurka laftiisa. Ku -habboonaanta halkan waxaa loola jeedaa in xarunta giraangirku ay ka badan tahay ama ka yar tahay, iyada oo ku saleysan xayndaabka gaariga laftiisa. Fender -ka, xarunta giraangiraha ayaa aad ugu weyn gudaha ama dibedda, taasoo keenta isku -duwidda guud ee gaariga.
2. Waxqabadka, waxqabadka halkan lagu tilmaamay wuxuu diiradda saarayaa xasiloonida gaadhiga iyo hagaajinta duubka baabuurka. Runtii, kororka wadada coaxial, waxay leedahay hagaajin xasilloon oo wanaagsan oo ku aaddan xawaaraha sare ee baabuurka. Waxaa intaa dheer, darawalka, booska giraangiraha gaariga iyo taayirada ayaa dareemi doona wanaag.
3. Qasab, sababtuna tahay xarig ballaaran oo giraangiraha, qiimaha et si sax ah looma xisaabin. Ka dib markii xarunta taayirrada lagu rakibo baabuurka, taayirrada gudaha ayaa ku xoqmi doona dahaarka gudaha, sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro boos -gooyeyaal oo loo wareejiyo xarunta dibadda. Xoogaa u dheeree si aad uga fogaato inaad ku xoqdo dahaarka gudaha. Waxa kale oo jira meel aan ku filnayn oo u dhexaysa xarunta giraangiraha iyo caliper-ka weyn sababta oo ah beddelidda bareegyada aad u waaweyn, sidaa darteed waa in xarunta giraangirku dibadda wax yar ka sii ballaadhaa.
Dhab ahaantii, marka loo eego ujeeddadii asalka ahayd ee naqshadda baabuurka, qalabka dheeraadka ah ee noocan oo kale ah ayaa mabda 'ahaan aan macquul ahayn oo halis ah.
Waa maxay khataraha baabuurka ka dib marka lagu daro jaakadaha ama daboolka?
1. Raaxada oo lunta. Ka dib marka lagu daro jaakadaha ama daboollada, wadista maalinlaha ah ee baabuurka lafteeda ayaa laga yaabaa inay sababto heer gaar ah oo luminta raaxada, gaar ahaan xaaladaha xun ee waddada. Xaalado gaar ah oo xad-dhaaf ah qaarkood, waxaa laga yaabaa inay waxyeello u geysato isku-duwaha guud ee dariiqa-nuska baabuurka.
2. Jir -gariirka ayaa sidoo kale sabab u ah sababo badan. Xaaladaha qaarkood, ku darida jaakadaha ama daboolka ayaa waliba sababi doona gariir yar oo jirka ah marka baabuurku socdo, laakiin xaaladdan waa dhif.
3. Xirashada taayirada. Ka dib markii la kordhiyo wadada, waxay sidoo kale kordhineysaa cufnaanta aan la furin, taas oo sidoo kale laga yaabaa inay saameyn yar ku yeelato xagalka u janjeera. Waxaa laga yaabaa inay xoogaa saamayn ah ku yeelato duugga taayirka, sida duugga oo aan sinnayn iyo xirashada darbiga dhinaca gudaha ee taayirka. , Suurtagalnimada xaaladahaani inay dhacaan ma sarreeyaan
4. Saamaynta bareega ayaa yaraaday. Rakaab aad u yar ayaa sidoo kale arkay in ka dib markii lagu daray jaakadaha ama fiilooyinka, bareega baabuurka uusan sidii hore u fiicnayn. Xaaladdan, inta badan xaglaha u janjeera ayaa is -beddelaya, taas oo keenta in la yareeyo aagga soo -dejinta taayirrada, iyo joojintu uma fiicna sidii ay ahaan jirtay. Intaa waxaa dheer, waa saamaynta nafsaani ee raacayaasha, kuwaas oo had iyo jeer dareemaya in dhibaatooyin kala duwan ay soo bixi doonaan ka dib marka lagu daro ama la beddelo qalabyada qaarkood.
5. Isbeddelka nidaamka joojinta, sababtuna waa kororka wheelbase -ka, cufnaanta aan la garanayn, iyo isbeddellada rabitaanka qaarkood, iwm, qaar ka mid ah hay'adaha wax -ka -beddelka shisheeye oo aad u fiican, ka dib markii ay ku daraan gaskets ama xargaha xarigga, ayaa bartilmaameedsan doona gaariga Nidaamka oo dhan ka joojinta shirkadda dib loo habeeyay si loo gaaro xaaladda ugu fiican ee gaariga.